WeChat ၏ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝအင်္ဂလိပ်အများပြည်သူနံပါတ်, FastenerInfo တရားဝင်ဖြန့်ချိနေပါသည်! - တရုတ် Cixi Zhencheng Machinery
WeChat ၏ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝအင်္ဂလိပ်အများပြည်သူနံပါတ်, FastenerInfo တရားဝင်ဖြန့်ချိနေပါသည်!
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, တရုတ် Fastener အင်ဖို B2B က်ဘ်ဆိုက်များ, မဂ္ဂဇင်း, လေ့ကျင့်ရေးစင်တာနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲအပါအဝင်တရုတ်အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးဆွဲထားမီဒီယာ, အဖြစ်လူသိများသည့်ဆွဲထားစက်မှုလုပ်ငန်း်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ကြှနျုပျတို့တရုတ် Fastener အင်ဖိုရာလုပ်နိုင်တရားဝင်အကောင့် FastenerInfo, ဆွဲထားသမိုင်းမှာပထမဦးဆုံး All-အင်္ဂလိပ် WeChat ပလက်ဖောင်း WeChat စတင်ခဲ့ပြီကြေညာဖို့ကျေနပ်နေသောခေါင်းစဉ်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု features တွေရဲ့ preview ကြစို့ ... မကြာခင်လာမယ့်ကြသည်!
1. Mini ကိုအစီအစဉ်ကို
FastenerInfo မကြာမီတစ် Mini ကိုအစီအစဉ်စွဲစေ, စက်ပစ္စည်း, ကိရိယာများ, မှို, မျက်နှာပြင်ကုသမှုကုန်ကြမ်းအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံဆွဲထားနှင့်ဆက်စပ်ပေးသွင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖုံးအုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။
(ကုမ္ပဏီအမည် / စံအားဖြင့်) -Search ပေးသွင်း
- အင်ဖိုဝယ်ယူ Browse
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လက်များ၏အဆင်ပြေဘို့, FastenerInfo "စံရှာရန်" အင်္ဂါရပ်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Din, IFI တွေနဲ့ JIS ဘီအဖြစ်စံချိန်စံညွှန်းများပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
3. Fastener သတင်း
FastenerInfo တွင်, သငျသညျအစဆွဲထားအပတ်စဉ်သတင်းတရုတ်နှင့်ကမ္ဘာ၏ကျန်အတွက်ဖြစ်ပျက်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖတ်နိုင်သည်။
ခေါင်းစဉ်စက်မှုဇုန်သတင်းများ, ကုမ္ပဏီအင်တာဗျူးများသစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများ, ကုန်သွယ်ရေးစာရင်းဇယား, etc ပြပွဲသတင်းများ, antidumping, သံမဏိစျေးနှုန်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး end-user စျေးကွက်ငွေလဲနှုန်းများပါဝင်ပါသည်
အခုဆိုရင်သင် WeChat တရားဝင်အကောင့်များကဆွဲထားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အဘို့အညာဘက်ကိုအချိန်ပဲ!
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အခွင့်အလမ်းများနှင့် updated တရုတ်ဆွဲထားသတင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ!
website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့▲ Long ကစာနယ်ဇင်း QR ကုဒ်ကို
CFD မဂ္ဂဇင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်▲ Long ကစာနယ်ဇင်း QR ကုဒ်ကို
မှတ်ပုံတင်ရန်▲ Long ကစာနယ်ဇင်း QR ကုဒ်ကို